Itoobiya oo si gooni ah u daneyneysa dekedda Berbera | KEYDMEDIA ONLINE
20 September 2021 RW Rooble oo qaabilay safiirka UK ee Soomaaliya
18 September 2021 War cusub oo kasoo baxay Xafiiska Farmaajo
Itoobiya oo si gooni ah u daneyneysa dekedda Berbera
Waxay u horay u shaacisay iney adeegsaneyso dakadaha waddamada deriska la ah si ay uga kaaftoonto ku tiirsanaanta kaliya dakadaha Jabuuti.
BEERBERA, Soomaaliya - Qasriga madaxtooyada Somaliland ee Hargeysa Muuse Biixi Cabdi ayaa ku qaabilay wasiiru-dawlaha arrimaha siyaasadda ee wasaaradda arrimaha dibedda Itoobiya, Mr. Redwan Hussein oo uu la socday qunsulka Itoobiya u fadhiya Somaliland, Amb Siciid Maxamed Jibriil iyo masuuliyiin kale.
Kulanka ay yeesheen ayay uga hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka wada-shaqayneed ee ka dhexeeya Somaliland, dawladda federaalka ah ee Itoobiya, arrimaha la xiriira isu-socodka labada dhinac ee ganacsiga iyo iskaashiga horumarineed ee waddada berbera corridor ay ugu horayso iyo isticmaalka dekedda Berbera oo uu tilmaamay wasiiru-dawluhu in dalka itoobiya uu baahi weyn u qabo dekedo kala duwan, si gaar ahna ay u daneynayaan dekedda Berbera.
Waxay isku soo hadal qaadeen habkii loo dhamaystiri lahaa heshiisyadii ay hore u galeen, lana gaaray xilligii la dhamaystiri lahaa hirgelinta wixii hore la isugu afgartay ee dani ugu jirto labada dhinac.
Daneynta gaar ah ee dekadda Berbera ayaa sabab u ah in Itoobiya oo ah dal ay ku nool yihiin in ka badan 100 malyan oo dhul weyna ku fadhida aynan lahayn dakad ay iyadu u madax bannaan tahay oo ay wax kala soo degto ama ay kadhoofiso.
RW Rooble oo qaabilay safiirka UK ee Soomaaliya
Warar 20 September 2021 15:17
Kulanka Ra'iisul Wasaare Rooble iyo safiirka Ingiriiska u fadhida Soomaaliya, waxaa kale oo ku wehlinaayay, Wasiirka cusub ee wasaaradda Amniga Cabdullaahi Mohamed Nur iyo la taliyaha Amniga ee Ra’iisul Wasaare Rooble Abdi Diirshe.
Guuleed oo shaaciyay waqtiga ICJ ku dhawaaqayso go’aanka Kiiska Badda
Warar 20 September 2021 14:36
Isu socodka dadka iyo gaadiidka Beledweyne oo hakad la geliyay
Warar 20 September 2021 14:03
Taageerihii Farmaajo ee Kenya lagu afduubtay oo la helay
Warar 20 September 2021 10:43
Warar 20 September 2021 10:10